Guddoomiya Gobolka Bay oo la kulmey Mas,uuliyiin katirsan Dowladda Turkey+Sawirro – Radio Muqdisho
Guddoomiya Gobolka Bay oo la kulmey Mas,uuliyiin katirsan Dowladda Turkey+Sawirro
Guddomiyaha Gobolka Bay Md Abdi Adan Hoosow ayaa waxaa uu la kulmey madax ka tirsan Dowladda Turkey, madaxdaasoo ay ka wada hadleen sidii loo hormarin lahaa howlaha gobolka Baay. Gudoomiyaha ayaa waxaa uu la kulmey xoghaya guud ee Ururka bisha cas ee waddankan Turkey Ms Aysegul GENC iyo ku xigeenka hey’addaasi Md Mintez Simsek kuwaasi oo sheegeyey in ay wax badan la qaban doonaan Maamulka Gobolka Baay ee uu gudoomiyaha ka yahay Md Hoosow.
Danjire Maxamed Mursal iyo Xoghayaha koowaad ee Safaarada Soomaaliya ee Dalka Turkey Md Abduqadir Maxamed Nuur (Jamac) ayaa labaduba waxay si diiran ugu soo dhoweeyeen Safaaradda Md Hossow.
Guddoomiyaha ayaa Madaxdii uu la kulmey wuxuu uga warbixiyey xaaladaha adag ee wakhtigan maamulkiisa ku shaqeynayo iyo waxyaabaha ay dowladdaTurkiga ka caawin karto dadka deggan deegaankaasi.
Md Hoosow ayaa waxaa uu aad uga mahad celiyey soo dhoweynta ay u sameeyeen Madaxda Safaarada Soomaaliya ee waddanka Turkey. Booqashadan Ayaan ahaa doonin midda ugu danbeysa, iyadoo guud ahaan dowladda Turkey ay gacan weyn u fidisey walaalahooda Soomaaliyeed ayaa haddana Gobolka Baay wax badan oo la taaban karo aan ka soo gaarin dowladda Turkey taasoo uu rajeynayoin ay wax iska beddelaan.
Guddoomiyaha ayaa inta uu ku sugan yahay dalkan Turkey waxaa u qorsheysan inuu la kulmo madax kale oo dheeraad ah. Wuxuu yiri guddoomiyaha “Horumar la taaban karo Ayaan ka sameyney gobolka Baay oo aan la dafiri Karin, laakiin kaalinta dowladda Turkey wey dhiman tahay, wixii hadda ka danbeeyana waxaan rajeyneynaa inay buuxin doonaan hadduu illaahey idmo”.
Guddoomiyaha ayaa waxaa la guddoonsiiyey haddiyad uu guddoonsiiyey Md Mintez Simsek taasi oo loogu talo galey Md Hoosow Governatooraha Gobolka Bay.
Wakiilka warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed ee wadamka Turkey
Md Ali Moalim Isak.
Dhageyso barnaamijka Dhacdooyinka 21 05 2015